ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟားခါးမြို့ ဟောပြောပွဲ (ရုပ်သံ)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 11:50 PM
လက်ရှိမြန်မာ.နိုင်ငံရေးကိုကြံ.ခိုင်ရေးပါတီက အာဏာရယူကြီးစိုးထားတာပါ ။
ဒါပေမယ်. ၂၀၁၅ မှာတရားမျှတပြီးစစ်မှန်တဲ.ရွေးကောက်ပွဲ
လုပ်ခဲ.ရင် NLD ကို ကြံ.ခိုင်ရေးပါတီ ကနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကြံ.ခိုင်ရေးပါတီဝင်တွေကထုတ်ပြောလာနေတာတွေ.ရပါတယ် ။
ဘာဘဲဖြစ်၂ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲဟာ မဲသာမခိုးခဲ.ရင်၊
ခဲ.ရင် . . . .
ဒါဟာ ကြံ.ခိုင်ရေးပါတီရဲ. လမ်းဆုံးမို.
တခုခု စီစဉ် မှာတော. အသေချာဘဲ ၊
ပြည်သူတွေ နိုင်ငံရေးသတိရှိကြဖို.ပါ ။ ။ ။ ။။။
ကျနော့အနေနဲ့တော့ လမ်းဆုံးလို့ မမြင်မိပါဘူး။ အမေရိကားလို နိုင်ငံမျိုးမှာတောင် ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒအရ အဓိက ပါတီကြီးနှစ်ခုက တစ်လှည့်စီလိုလို အာဏာရကြရတာပါပဲ။ ကြံ့ဖွံ့တွေသာ စိတ်ရင်းစေတနာ အမှန်ထားတတ်ခဲ့ရင်.. ဗိုလ်ကျ ညစ်ပတ်ချင်တဲ့ စိတ်တွေ ပြောင်းလဲလာခဲ့ရင်..
အများပြည်သူရဲ့ လိုလားထောက်ခံမှုကို ရခဲ့ရင်.. သူတို့အလှည့်ဆိုတာလည်း အမြဲရှိနေနိုင်တာပါပဲ။ NLD အဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံး တစ်သက်လုံးကောင်းမယ်လို့ ဘယ်သူမှ အာမ မခံနိုင်ပါဘူး။ အာဏာကို ကြာကြာရထားရင် ပုထုဇဉ်လူသား အများစုက ယစ်မူးသာယာသွားတတ်ကြတယ်။ ဖက်တွယ်ထားချင်ကြတယ်။ ဘယ်မှာမှန်း မသိသေးတဲ့ ကုလားထိုင်ကိုတောင် လုနေကြတဲ့လူတချို့ တွေ့နေရတာပဲလေ။
နိုင်ငံအပေါ် တကယ်သာ စေတနာထားတတ်ခဲ့ရင် လွှတ်တော်ထဲရောက်မှ၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်မှ.. နိုင်ငံရေးအလုပ် လုပ်လို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ လွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးတွေမှာ နိုင်ငံကောင်းဖို့အတွက် လုပ်ကိုင်စရာအများကြီးပါ။ ဖြည့်စရာ ကွက်လပ်တွေ မြောက်မြားစွာပါ။
ကြံ့ခိုင်ရေးက အတိုက်ခံပါတီ တစ်ခုအနေနဲ့ ရပ်တည်ပြီး အစိုးရရဲ့ အားနည်းချက်၊ ဥပဒေရဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ထောက်ပြကြဖို့ကလည်း တိုင်းပြည်အတွက် တကယ့်ကို အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍပါ။
ဒါပေမယ့် လူညစ်တွေ ကြီးစိုးတဲ့ ခေတ်ကြပ်ကြီးမှာ ပြည်သူတွေ နိုင်ငံရေးသတိ နိုးနိုးကြားကြား ရှိနေသင့်ပါတယ်။
ဒီနိုင်ငံဟာ အမေရိကား မဟုတ်သလို ကြံ.ဖွတ်ပါတီ ဟာလည်း အမေရိကား က Democratic , Republican ပါတီတွေနဲ. နှိုင်း
ယှဉ်လို. မရအောင်နိမ်.ကျပါတယ် ။
ကြံ.ဖွတ်ပါတီဟာသူတို.ရဲ.လမ်းဆုံးကိုဘယ်တော.မှအ ရောက်ခံမှာမဟုတ်သလို nga ba ပြောသလို အတိုက်အခံပါတီလုပ်ဖို.လည်း စိတ်ကူးမှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ၊
သူတို.က ဆိုင်းဝိုင်းကြီးတီးခွင်.မရရင် ပတ်မကြီးထိုးဖေါက်ယုံတင်မကဘူး ၊ ဇါတ်ရုံကြီးတစ်ခုလုံး
ပြည်သူတွေ ၊ ပြည်သူ.ပါတီတွေ သတိထားသင်.ပြီ ။
STA MDY said...
I have tried to get an optimistic point of view. But, practically on criteria, you are right.